Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Onye minista nlegharị anya nke Seychelles kpọrọ DMC
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Onye minista na -ahụ maka ihe mba ofesi na njem nlegharị anya na odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya nke Seychelles zutere ọtụtụ ụlọ ọrụ na -ahụ maka njikwa ebe.
N'ịga n'ihu na ebumnuche ya ka ọ mara ndị mmekọ ụlọ ọrụ njem na ngwaahịa ha, Minista mba ofesi na njem nlegharị anya na onye isi odeakwụkwọ maka njem, onye nnọchi anya Sylvestre Radegonde, zutere ọtụtụ ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem na Tọzdee, Ọgọst 12, 2021.
N'oge nzukọ ya, Minista ahụ kpọrọ oku maka mgbanwe ngwaahịa na ọrụ.
Ọ metụtakwara mkpa ọ dị itinye omenala na ihe nketa nke Seychelles n'onyinye njem obodo ahụ.
Onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya, oriakụ Sherin Francis so onye ozi Radegonde na njem ọgbakọ.
Minista Radegonde ji ohere ahụ wee kpọọ oku maka ngwaahịa na ọrụ dị iche iche, na -akọwapụta mkpa ọ dị ịkwalite ahụmịhe onye ọbịa site na itinye omenala na ihe nketa nke Seychelles na onyinye nlegharị anya anyị.
Nleta ahụ na Tọzdee malitere na Pure Escape, DMC okomoko nke nnukwu ahịa ya bụ Russia ma nwee ọfịs na UK, Maldives, Seychelles na UAE nke na -enye ndị ahịa ya ngwugwu gụnyere ndị na -a butụ mmanya na ndị njem.
Companieslọ ọrụ ndị ọzọ gụnyere Silver Pearl Tours na Njem nke na -enye ọtụtụ mmemme gụnyere njegharị na nnyefe nkeonwe, na Cheung Kong Travel, nke na -elekwasị anya n'ahịa ndị China, na -enye ntuziaka asụsụ pụrụ iche maka otu na ndị njem n'otu n'otu na ngwugwu ha.
Onye ozi Radegonde zutere ọtụtụ DMC nke Seychelles gụnyere njem mmiri ozuzo Summer, nke na-enye ndị ahịa Saudi Arabia, ndị ahịa Russia na ndị Europe ọtụtụ ngwugwu na ọrụ ijikwa ụgbọ mmiri, yana Ocean Blue Travel, ụlọ ọrụ ezinụlọ nwere, nke na-emekọrịta ndị ahịa na UAE, Germany site na webụsaịtị ha.
DMC ndị ọzọ Seychelles nwere DMC gara leta gụnyere Travel Travel na-enye ngwugwu njem maka ụlọ ọrụ, ndị mmadụ n'otu n'otu na ahịa Europe na Middle East, yana Luxury Travel nke na-enye ngwongwo okomoko n'ahịa Russia na Middle East.
“Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ ozi m ịmara ndị mmekọ na ịghọta azụmahịa ha. Nleta ndị a na -enye anyị ohere igosipụta ekele anyị na ọkachasị agbamume anyị nye ha ka ha gbalịsie ike ịnye ndị ọbịa anyị ọrụ na ngwaahịa dị mma, ”ka Minista Radegonde kwuru.
Na mgbakwunye na imata onwe ya na DMC, Minista Radegonde mere ka ọ pụta ìhè mkpa ụlọ ọrụ maka imepụta ngwaahịa dị iche iche na ịkwalite njem nlegharị anya ọdịbendị. Minista ahụ kwusiri ike, "Ịkwalite ọdịbendị creole ga -eme ka ahụmịhe ndị njem dị mma kamakwa ọ ga -amụbakwa ọdịbendị anyị na ndị ọrụ aka obodo yana inye ndị na -ese ihe na mpaghara anyị usoro ikpo okwu zuru ụwa ọnụ."
Onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya, oriakụ Sherin Francis, onye soro onye ozi Radegonde na njem a, kwuru na nleta oge niile bụ ohere ijikọ ya na ndị mmekọ wee ghọta ihe ịma aka ha, nke na -enyere aka na ngalaba njem nlegharị anya lekwasị anya n'ịkwalite ahụmịhe onye ahịa na -aga na ọkwa niile.
Nleta ndị ahụ mekwara ka a mata ihe dị iche iche na ọganiihu dị na ụlọ ọrụ njem na ahịa mba dị iche iche.
Saịprọs yipụrụ ndị mba ọzọ 45 Visa ọla edo ha ...
90% nke nfuli gas UK na -akpọnwụ n'ihi ịzụ ụjọ
Ndị ọzọ karịa Safaris anụ ọhịa, ọ bụ ugbu a njem nlegharị anya golf na ...
Nweta ọrụ: Denmark na -agwa ndị na -akwaga mba ọzọ ka ha rụọ ọrụ maka ọdịmma…
Nwanyị njem njem nwanyị Tanzania nwere obi ụtọ na elu
Expo 2020 Dubai na -enweta nnyefe pụrụ iche site na US Open
Nkwupụta ọrụ US: Mgbake adịghị mma maka Ntụrụndụ na ...
UFO Sightings: Ebe kachasị mma iji nweta onye amabeghị ...
Taliban: Ọ bụ naanị ndị mba ọzọ nwere ike ịhapụ Afghanistan na…
Kuwait Na-amachibido Citizmụ amaala niile Agaghị Achọta Site na Ofesi ...
Air Astana na -enweta ụgbọelu ọhụrụ ya nke isii nke Airbus A321LR
Airbus na-ekwupụta ụdị izizi gburugburu ebe obibi ya
2021 A kwanyeere nsọpụrụ maka ọgbakọ mba ụwa nke 37 nke IGLTA
Airbus ga-akwalite nkwukọrịta ókè-ala n'etiti ...
USA iji kwụsị mmachibido njem njem maka ndị ọbịa si mba ofesi gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa